Indlela esiphatha ngayo ngamathumba e imbilapho azalela?
Lapho ukuvuvukala follicle izinwele kanye nezindlala sebaceous, eseduze nale ndlela, kungase kube ithumba ezibuhlungu. Bilisa imbilapho azalela kubangela staph, okuyinto eba isikhwama izinwele, ikhuthaza ukuvuvukala. Kulesi abavusa ezungezile kwezicubu izinwele follicle. Ngesikhathi besanda kuqala ke amathumba zinjengezinduna abajwayelekile, kodwa umehluko ukuthi lesi sifo isikhumba kunzima futhi kubuhlungu.
Ngo ukuthuthukiswa isibani isifo ligcwele ubomvu. Kulokhu, lo muntu has lokujabulela ubuhlungu uphumule futhi ngesikhathi ukunyakaza. Ngaphezu kwalokho, izinkinga ezingase zivele angagcina uma kunenkinga ezifana ngamathumba e imbilapho azalela. Izithombe yale mfundo kungabonwa ngezansi.
Amathumba kungavela kwezinye izikhumba. Kungenzeka emuva, esifubeni, imilenze, emathangeni, ebusweni. Kodwa uma nesenzakalo amathumba endaweni imbilapho Kunzima kakhulu.
Kungani kungase Bilisa imbilapho azalela? ingase ibe khona ehlukile Izizathu. Kodwa iningi izinqubo ukuvuvukala esikhumbeni avele ngenxa amasosha omzimba esincishisiwe. Futhi izizathu ukunciphisa umzimba ozivikela kungaba isifo wahlupheka umuntu amavithamini, ukudla okungenamsoco, ukucindezeleka.
Bilisa imbilapho azalela kungenzeka ngenxa agqoke izinto zangaphansi ungakhululekile, Friend noma zokwenziwa. Friction emalungeni kuholela unezilonda esikhunjeni. Esikhathini okuholela imifantu micro akwazi ukungena kwamagciwane. Ngokuvamile, le nkinga kwenzeka ngesikhathi uhambo noma uhambo olude, ngesikhathi owesifazane, awukwazi ngokugcwele ukufeza izinqubo yokuhlanzeka, izingubo.
Enye ingxenye isizathu sokuqala sokuba kube ngamathumba e imbilapho azalela, is ukushefa. Ngemva le nqubo ngokuvamile ukusikeka kwesokunxele kanye nezilonda esikhumbeni, ongaba esangweni for kwema- Staphylococcus. izinwele Ingrown ingabagulisa kumiswa ithumba.
Bilisa imbilapho azalela kungenzeka nge amasosha omzimba enciphile ngenxa hypothermia ngemva ebhukuda abandayo samanzi bedle umoya noma okusalungiswa.
isikhumba Ukwandiswa umswakama
Endaweni imbilapho kungabonakala nasemkhakheni ukujuluka esindayo eholela amathumba. Abantu nale nkinga kudingeka njalo kwemanti kanye nalesinye ukusetshenziswa powder.
Udinga ukudla ngendlela efanele, watch out for ukuba animise ekudleni amavithamini ezidingekayo namaminerali. Kubalulekile ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe, kusukela ngalesi sikhathi, umzimba udinga amavithamini owengeziwe.
Ngezinye izikhathi ngamathumba e imbilapho besifazane kwenzeka ngenxa isifo esithathelwanayo.
Phakathi nokuvuthwa furuncle izimpawu imbilapho ziyefana ukubukeka amathumba kunoma iyiphi enye indawo emzimbeni. Kunezigaba ezintathu kule nqubo.
1. indawo isikhumba ezilimele noma usike ungakwazi uqaphela okuvela kuyo izindawo abomvu. Ngemva kwesikhathi esithile, kwakheka ngaphakathi uphawu. It wazizwa ukuluma kancane futhi ukulunywa endaweni.
2. Ngemva kwalokho, INGENA ISINYENYELA (ngezansi isikhumba aqoqana ketshezi, ngaphakathi kwalo la i-lymph, igazi ubomvu). Thina ngamathumba kwenzeka ukuguga ikhanda mhlophe, kwandisa. Ububomvu yandisa, okubangela ubuhlungu obunzima, inguinal lokushisa zone luyanda.
3. In the isinyathelo sesithathu, ngemva nokuvuthwa, ubilise amakhefu. Lokhu kuhambisana ubovu okukhipha induku, eshiya umgodi ojulile. Okwesikhathi esithile ubomvu kungenziwa ikhishwe.
Indlela esiphatha ngayo ngamathumba e imbilapho azalela
Ukuthola ngesikhathi abantu bangayithola imfundo enjalo e imbilapho, ubone udokotela wakho, abangakwazi ukunquma indlela eziyingozi ukuvuvukala, nokuthi ukusabalala ukutheleleka ungase uqhubeke. Lo chwepheshe uzokwazi ukukhetha indlela engcono kakhulu ukwelashwa. Ukuze kuxazululwe le nkinga kungaba kokubili inqubo ngoludala futhi kuhlinzwa. Kutholakele ku zisandakuqala ngamathumba e imbilapho azalela kalula esilaphekayo.
Ngokuyinhloko indawo elikhanyayo ukusula isinqandakuvunda (utshwala, boric acid), ngemva kwalokho-ke sisetshenziswa ihtiolovaya wamafutha noma wamafutha Wisniewski. izidakamizwa ezinjalo ukukhuthaza nokuvuthwa ngokushesha futhi ukuvulwa furuncle.
Ngemva kokudedelwa zonke ubomvu, isilonda ukuthi uhlala ziphathwe i-hydrogen peroxide. Futhi, kubalulekile ukwenza ihtiolovaya wamafutha. Amathumba endaweni imbilapho kwabesifazane ngemithi elwa namagciwane kuleli cala hhayi belashwa. Uma kwenziwe ngendlela efanele futhi ngokushesha, ukusetshenziswa kwazo ayidingekile.
Kungenzeka yini ukuvula thumba?
inqubo enjalo asikwazi ekhiqizwa ekhaya, kuyancomeka ukuba uthintane Uma udokotela ohlinzayo okusindisayo thumba ngaphandle ubuhlungu, uyosingatha zonke izinqubo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi le ndawo ethintekile ukuze siphinde sithole ngokushesha.
Kunemithi yesintu kuphumelela kakhulu khona inkinga enjalo.
Udinga eyodwa onion. It is unciphe ngesigamu futhi ibekwe epanini ngaphandle amafutha. Kufanele ulinde kuze kube u-anyanisi kahle zapechetsya. Nqumani ingxenye isibani sisetshenziswa kusayithi ukuvuvukala, ulungise usimende futhi ushiye ubusuku. Inqubo iyaphindwa izikhathi ezimbili noma ezintathu. Anyanisi okuyinto ephekwe ngale ndlela has a impahla eqinile edonsa okukhuthaza okusheshayo nokuvuthwa furuncle uphinde uphume yayo ngaphandle. ubomvu Clean kusuka isilonda izinsuku ezimbalwa kufanele zimanziswe nge ichthyol wamafutha.
Esimweni ukuthi imishanguzo ayiqalwanga ngesikhathi, ungase uzizwe yezinkinga ezidinga usizo lwezempilo ngokushesha. Lokhu kuyadingeka ezimweni ezinjalo:
Lapho Ukuwohloka isimo jikelele umzimba, olubonakaliswa lakhulisiwe izindlala zamanzi imbilapho ndawo, imfiva, ikhanda nesicanucanu.
iyiphi Uma une namathumba izingxenye ezihlukahlukene zomzimba. Lokhu kungase kube uphawu lokungabi ukusabalala staph ukutheleleka emzimbeni, okungaveza furunculosis ezingamahlalakhona. isimo esinjalo kudinga ukusetshenziswa saziso kwama-antibiotic.
Ngo khona kwale nkinga kwabesifazane abakhulelwe. Kusukela ukuvuvukala kule ndawo kungaholela ithumba, kunobungozi umama kanye naye umntwana ongakazalwa. Isimiso ukwelashwa kufanele isisindo futhi yakhelwe. Izidakamizwa zikhethwa kuphela udokotela emva ahlola isimo umama ne-fetus. Kule nkathi akusiyo efiselekayo lisuswe thumba e imbilapho azalela. Ukwelashwa kwemfuyo kusebenza ngoludala, usebenzisa ama-ejenti isinqandakuvunda futhi imithi elwa nawo.
Yini engenziwa kuleso simo?
Kuyinto engathandeki ukucubungula endaweni elikhanyayo ngemibala izixazululo (zelenki, fukartsina, iodine), ngoba udokotela akakwazi ukunquma ngokuthe ubukhulu bawo bangempela ukusuka endaweni yenhlekelele.
Ngemva kokuvula ngamathumba ukusingatha kubalulekile ukusebenzisa gauze oyinyumba kuphela noma ngebhandeshi oyinyumba.
Kuvulwe ngamathumba ke akuvumelekile ukuchelela kuze isilonda kuze uphulukisa ngokuphelele.
Ngeke esetshenziswa ekwelashweni imikhiqizo sekwephuzile noma lezo zivulekelé isikhathi eside.
Lapho inkinga efana ngamathumba e imbilapho azalela, ukwelashwa nge-antibiotic oludingekayo kuphela ezimweni eziyinkimbinkimbi, ukuze umzimba wakwazi ukunqoba ngokuphelele lesi sifo kwabanye.
Kufanele bakwazi ukunakekela umzimba ngokuvamile, ungakhohlwa mayelana nezinqubo inhlanzeko. izihlambi Daily kufanele kube umkhuba omuhle, ngaphezu, kudingeka njalo ukushintsha izingubo it kuzokuvumela isikhumba sakho sikwazi ukuphefumula kangcono nokugcina umsebenzi olwawuvikele. Zama ukugwema isikhumba microtrauma. Uma lokhu akuzange kugwemeke, kufanele ngokushesha aphathe isilonda usebenzisa izibulali-magciwane.
Kuyadingeka ukuba banake umsoco. Imenyu sosuku kumele sibe izithelo samanje nemifino, ayo fresh. Kuyinto akufuneki ukuba ususe ikhofi, ushokoledi, ushizi, ezinoshukela, ukudla okubabayo nokudla okunamafutha. Kuwufanele inkambo amavithamini namaminerali. Ungakhohlwa ukuthi umzimba bephilile futhi benamandla kulula ngokuzimela unqobe isifo.
Imishini service Car: Izinhlobo eziyisisekelo
Imitholampilo engcono kakhulu ye-cosmetology eSt. Petersburg: incazelo, ukubuyekezwa
Cap izinaliti: umdwebo incazelo. izigqoko Ukwaluka spokes